Aad ka fekeri karaa daawashada filim oo aan wax music oo dhan? Music yahay mararka qaar waxa ay filim ka dhigaysa, waxay u kordhisaa xuman oo dhan saamaynta gaar ah loo baahan yahay in ay yihiin si ay u caawiyaan soo baxay waxa jilayaasha aysan heli karin. Markii uu daawanayay filim waxaan mararka qaarkood ma ogaan sida ay muhiim kaliya soundtrack yahay sababtoo ah waxaan ka filan kaliya inaan halkaas. Inkastoo halabuurka dhibcaha muusikada u filim jirin ka duwan yahay qoraal kale music , waxaa jira waxyaabo laxamiistaha u baahan yahay in laga fekero marka ka shaqeeya soundtrack a movie filimada in aanay jeclayn in haddii ay kaliya qoraal music. Music waa tegaynaa filimka waxaa la kulaney si aad u hesho jawaabta saxda ah dareenka dhagaystayaasha daawashada filimka. Halkan waxaa ku qoran liiska oo ka mid ah 10 composers sare music film
John Williams waxa uu ku dhashay on 8th February 1932 iyo mid ka mid ah ugu wanaagsan ee America ee biyaaniiste, laxamiistaha iyo kirishbooy. Waxa uu ka kooban dhibcaha film fara badan oo ku sii gariirin doonaa warshadaha filimada. Shuqulkiisa ayaa saftay NBC News Habeenka, Olympic Games kaliya in la xuso dhowr ah. Waxa uu ku guuleystay abaalmarinta Golden Globe, Grammy Awards, British Academy Awards iyo Academy Awards.
Tuugadan of Art Khasaariyey
Hans Zimmer waa laxamiistaha Jarmalka iyo sidoo kale soo saare heesaha. Shuqulkiisa ayaa saftay in ka badan 150 filim. Waxa uu ku guuleystay 3 Awards nabadsugida ee Qadiimiga ah, Academy Award, 4 Awards Grammy iyo 2 Golden fijaan. In article ah posted by Daily Telegraph, waxa uu loo magacaabay mid ka mid ah hogaanka 100 nool Sweden. Shuqulkiisa ayaa saftay soo socda:
King Libaaxa ayaa
Burcad badeed ee Caribbean
Waxa uu ku dhashay 29-kii May 1953 iyo shaqada ayaa kasoo muuqday filimada kala duwan iyo barnaamij taxane ah. Danny Elfman sidoo kale waa soo saare actor, song-qoraa record oo ah. Waxa uu ku guuleystay abaalmarinta Grammy ayaa sidoo kale loo doortay Academy Awards. Waxa uu sidoo kale ku guuleystay Richard Kirk Award. Waxa uu shaqada waxaa lagu ciyaaray:
Ragga in Black
Edward maqas Hands
Alice in Ihmemaa
James Horner waxa uu ku dhashay on 14 August 1953 iyo waxaa loo arkaa mid ka mid ah composers ugu fiican America lahaa. Waxa uu ka kooban in ka badan 100 filim oo ku guuleystay 3 Saturn Awards, 2 Academy Awards, 3 Satellite Awards iyo 2 Golden Globe Awards. Waxaa sidoo kale loo doorto 3 British Academy Film Awards. Waxa uu shaqada ayaa saftay:
Bernard Hermann ku dhashay 29-kii 1911 oo loo arko mid ka mid ah laxamiistaha ugu wanaagsan ee Maraykanka ayaa si gaar ah oo duurka ku ah naqshadeynta mooshin. Waxa uu si fiican u yaqaan la hits soo socda. Waxa uu ku guuleystay Academy Award ay shuqulkiisa u sameeyaan.
Maalinta Dhulka weli taagan
The Ruuxa iyo Mrs. Muir
Howard Shore si fiican u yaqaan laxamiistaha Canadian ay shuqulkiisa u sameeyaan in dhibcaha film. Waxa uu ka kooban in ka badan 80 filim. Waxa uu dhaliyay 3 abaalmarinta Academy. Waxa uu shaqada ayaa kasoo muuqday filimada sida:
Madow iyo Valentino
Qadada oo qaawan
Soul ee Ultimate Nation ah
Wuxuu ku dhashay on 10-kii February 1929, Jerry Goldsmith waxaa lagu xasuustaa sida mid ka mid ah composers ugu fiican American for taxane telefishan iyo filimo. Qaar ka mid ah abaalmarinta uu dhaliyay waxaa ka mid ah Oscar, Grammy, British Academy Film Awards iyo Golden Globe Awards. Shuqulladiisa oo ka mid ah:
Star in aaannu: The Next Generation
Wuxuu ku dhashay 10-kii November 1928, tan laxamiistaha Talyaani waxaa loo arkaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican sababtoo ah waxa uu ka kooban loogu barnaamij taxane ah oo dhowr ah oo ay ku jiraan tiro ka badan 500 oo sawiro mooshin. Shuqulkiisa ayaa saftay filim award-winning kala duwan. Tusaalooyin yar ayaa waxaa ka mid ah:
Feedh in jeebka
Wanaagga, Xumaanta, Fool-
Dila Bill Vol. 2
Beri baa ah in West ah
Elmer Bernstein ayaa ku dhashay 4-tii April 1922 iyo maamuus kaga tagay mid ka mid ah composers ugu fiican ee Mareykanka. Waxa uu ka kooban soosaarista television fara badan iyo sidoo kale filimada. Waxa uu dhaliyay Oscar Award oo ay ku jiraan laba Golden fijaan oo la doortay Grammy Awards. Waxa uu si fiican u yaqaan for:
Man ayaa gacan Golden ah
Si Modern Millie
Si Mockingbird a Dila
Michael Giacchino waa si fiican u yaqaan laxamiistaha Maraykan ah ayaa ka kooban abaalmarinta kala duwan guusha video, filimada iyo sidoo kale barnaamij taxane ah. Qaar ka mid ah abaalmarinada uu dhaliyay mid ah Grammy, Emmy, Academy Award iyo Golden Globe Award.
Star ugu celiso meel gudcur
Dawn oo ka mid ah Planet ee ku nidhi ka
Isagu waa Yurub ah ku dhashay England ee 1933. Waxa uu ka dhigay isticmaalka shineemooyinka aabbihiis by halabuurka music film. Waxa uu noqon karaa awood si loo xakameeyo dhowr mashiinada shineemada oo ay ku jiraan sanduuqyada qiyaas aan dibadda help.Professionally, waxa uu ahaa mid ka mid ah composers Ingiriisi iyo kirishbooyadooda ee music film. Shaqadiisii ​​fiican ku lug leedahay kuwan raadkaygay codka ee James Bond ee shineemo oo waa mid aad u gaar ah.
Isagu waa Australian ah oo noqday halyeey ka kooban of music film classical markii uu u dhaqaaqay America. Shuqulkiisa uu bilaabay in uu ilmanimada hore iyo dambe ku qoran inaad wax ka barato Vienna ee Hochschule fuer Music und Darstellende Kunst halkaas oo uu ka helay aqoon dheeraad ah oo duurka ku. In uu shaqo, uu diyaariyey dhawr classical music, garaaca iyo Gurtida.
The Best Spotify Downloader in Download Spotify Music, Songs, MP3 Free
Iibso CD-ka CD Store offline
Meelaha Best Gudbinta Cheap Music Download
> Resource > Music > Top 10 Film laxamiistaha oo ay caan ku music Qadiimiga ah